League of Legends: Wild Rift ရဲ့ Wild Pass အတွက် လမ်းညွှန် | Codashop Blog MM
League of Legends: Wild Rift ရဲ့ Wild Pass အတွက် လမ်းညွှန်
League of Legends​: Wild Rift မှာ Wild Pass ဆိုတာဘာလဲ?
Wild Rift က သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် Wild Pass ကို ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ Ranked Season2ရဲ့ အစမှာတော့ ကစားသမားတွေက အရမ်းမိုက်တဲ့ ပစ္စည်းတွေအများကြီးရရှိနိုင်ပါတယ်။ Upgrade လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ ပိုတောင်ရအုန်းမှာပါ။ Wild Pass မှာဆိုရင် Premium (Skin ၊ Emotes ၊ Icons နဲ့ Recall Port) တွေပါတဲ့ Level 50 ရှိတဲ့ Reward တွေပါ၀င်ပြီး အခမဲ့ (Blue Motes နဲ့ Poro Coins တွေ) ပါ၀င်ပါတယ်။ ကစားသမားတွေက အပတ်စဥ် Mission တွေနဲ့ Elite Mission တွေကိုပြီးအောင်လုပ်ပြီး Level တွေတက်အောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Wild Pass က ကစားသမားတွေ Rift ထဲမှာ ဂုဏ်ဆာလို့ရမယ့် အမိုက်စား Item တွေကိုဝယ်ယူနိုင်မယ့် ငွေကြေးတွေနဲ့ အခြား အစီအစဥ်များစွာကိုလည်း ထည့်သွားထားပါတယ်။
Wild Rift မှာ Wild Pass ရဖို့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?
Wild Pass ကိုရရှိဖို့ အတွက် အရမ်းလွယ်ကူပါတယ်။ ဒီ အဆင်(၃)ဆင့်ကိုဘဲ လိုက်လုပ်လိုက်ရင် ခံစားခွင့်တွေ အများကြီးရမှာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ပိုရဖို့အတွက် ပိုကစားလိုက်ပါနော်။
League of Legends : Wild Rift ကို သင့် စက်မှာ ဖွင့်လိုက်ပါ။
သင့် စက်မျက်နှာပြင်ရဲ့ ဘယ်ဖက်ထောင့်မှာ ရှိတဲ့ Wild Pass ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
Wild Pass Lobby ကို ၀င်လိုက်တာနဲ့ Rewards Tab မှာ သင်ရရှိနိုင်မယ့် Item တွေကို သင်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Mission Tab ဆိုတာကိုလဲ သင်တွေ့နိုင်ပြီး အဲ့ဒီ့မှာ Wild Pass တစ်လျောက်မှာ သင်လုပ်ရမယ့် အပတ်စဥ် နဲ့ Elite Mission တွေကို တွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Preminum Reward ကိုရယူဖို့အတွက် Unlock ဆိုတဲ့ ခလုတ်လေးကို သင့် စက်မျက်နှာပြင်ရဲ့ ဘယ်ဖက်ထောင့်မှာ နှိပ်လိုက်လို့ရပါတယ်။
ကစားသမားတွေအနေနဲ့ Wild Pass ရဲ့ ၅၉၀ Wild Cores တန် Standard Version နဲ့ ၉၉၀ Wild Cores တန် Wild Pass Elite Edition ကို ရွေးချယ်ခွင့်ရှိပါတယ်။ Elite က Level ၅ ခုကို ချက်ချင်းပွင့်နိုင်ပြီး အဆင့်မြန်မြန် တတ်ဖို့ Bonus Elite Mission တွေကိုလဲ လုပ်ခွင့်ပေးထားပါတယ်။
သင် Level ၅၀ ကို ရောက်ရှိရင်တော့ Battle မှာ ကြွားဖို့ အရမ်းမိုက်တဲ့ Hexplorer Jax အထူး Skin ကို​ရရှိနိုင်မှာပါ။ သင်​ရရှိနိုင်တာတွေက ဒီမှာတင်ပြီးသွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ Wild Pass ကို ပြီးသွားရင်တော့ Bonus Reward တွေရဖို့ ဆက်လက်ကြိုးစားနိုင်ပါသေးတယ်။
Wild Pass မှာ ဘာ Reward တွေပါပါသလဲ?
အောက်ပါ စရင်းမှာ Level တစ်ခုစီမှာ ရရှိနိုင်တဲ့ Reward တွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်။
Wild Pass ၀ယ်ရတာ တန်ရဲ့လား?
Wild Pass မှာပါ၀င်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေကတော့ အရမ်းလိုချင်စရာပါဘဲ။ ပိုက်ဆံအပိုလေးရှိပြီး သီးသန့် အထူး Skin တို့ Emotes တို့ Baubles တို့ နဲ့ Poro Coins တွေအများကြီးကို လိုချင်ရင်တော့ အရမ်းတန်တဲ့ အခွင့်အရေးပါဘဲ။ အခမဲ့ ကစားရတာကြိုက်တဲ့ ကစားသမားတွေကတော့ Wild Pass က အရမ်းမိုက်တဲ့ Items တွေရနိုင်လို့ နောက်လိုချင်မှ ၀ယ်သင့်ပါတယ်။
Wild Core တွေ ၀ယ်ယူပြီး ဒီနေ့ဘဲ Wild Pass ကို ရယူလိုက်ပါ
အနည်းဆုံး Wild Cores ၅၉၀ ဖြည့်လိုက်ပြီး Standard Wild Pass သို့မဟုတ် Wild Core ၉၉၀ တန် Wild Pass Elite ကို ၀ယ်ယူလိုက်ပြီး အကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးကို သင့်အကြိုက်ဆုံး League of Legends : Wild Rift မှာရယူလိုက်ပါ။ ဒီကို​​ နှိပ်ပြီး Wild Cores တွေကို​ ဒီနေ့ဘဲ ဖြည့်လိုက်ပါ။
Wild Pass ကို ၀ယ်ယူဖို့ Wild Cores တွေ အလုံအလောက်ရှိဖို့ သတိရပါနော်။ သတင်းကောင်းကတော့ Wild Cores တွေကို Codashop မှာဘဲ အလွယ်တကူ ဖြည့်လို့ရပါတယ်!
Previous articleFree Fire OB27 Update: လက်နက် ၊ character နှင့် အခြား optimizations အသစ်များ
Next articleMobile Legends Starlight အသင်း၀င်ခြင်း ဆိုင်ရာလမ်းညွှန် အပြည့်အစုံ (မှု: ဧပြီ ၂၀၂၁)